Ball iibheringi, Deep Groove Ball iibheringi, Self-Aligning Ball iibheringi - Baigong
Gxila ekuPhatheni iNkonzo
Shaft umnqamlezo ethwele
Elungiselelweyo iibheringi non-standard
Iibheringi ezingekho semgangathweni ezichukumisiweyo
Iibheringi zebhola encinci
Impompo yamanzi shaft ethwele amanzi
Sleeve shaft Custom
Ityholo lokuthambisa ngokwalo
"Umgangatho wemveliso ezinzileyo, ukudala ishishini lodidi lokuqala, kunye nokwanelisa iimfuno zabathengi zokusetyenziswa" yinkampani engagungqiyo, kwaye "umthengi kuqala, igama lokuqala" yinjongo yanaphakade yenkampani yethu.
Inkampani iya kubonelela abasebenzisi ngeempendulo zeminxeba yonke imihla ukunceda abasebenzisi ukusombulula naziphi na iingxaki ekuhlangatyezwane nazo kwimveliso nakwinkqubo.
Logama ukhetha iimveliso zethu, ziya kubonelelwa simahla kwaye zikukhokele ukuba uzisebenzise, ​​kwaye ziya kusiwa ngokukhawuleza.
NgoJanuwari 28, 2021
Iibheringi ezingekho mgangathweni iibheringi zibalulekile kwaye ziphambili kwicandelo lokuvelisa izixhobo, ezichonga ngokuthe ngqo ukusebenza, umgangatho kunye nokuthembeka kwezixhobo eziphambili kunye neemveliso zokubamba, kwaye zaziwa njengezinto "zentliziyo" zokwenza izixhobo. N ... / p>
Zonke iintlobo zamanxeba oomatshini, njengokukrala, imikrwelo, ukonzakala koxinzelelo, ukugruzuka, njl., Kuya kubangela ukufakelwa kokuthwala okungalunganga, kubangele imithwalo ye-eccentric kunye noxinzelelo loxinzelelo, kwaye kubangele ukwehla kokujikeleza ngokuchanekileyo kunye nobomi benkonzo. Umhlwa, ulusu olumnyama, kunye nokungena, ezi zimbini zokugqibela ziyi-d ... / p>